Manchester United Oo Ugu Dambayn Calaamadsatay Agaasimaha Ciyaareed Ee Ay U Qorshaysay Inay Ku Xaliso Dhibaatadeeda Suuqa Kala Iibsiga – GOOL24.NET
Kooxda Manchester United ayaa u shidaal qaadaneysa qaabkii ay ku xalin lahayd dhibaatada mudooyinkii ugu dambeeyay kooxdeeda ka haysta dhinaca suuqa kala iibsiga waxaana ay markan diiradoodu qabatay shaqsigii ay ku xalin lahaayeen dhibtaas.
Tababare Jose Mourinho iyo guddoomiye ku xigeenka kooxda ee Ed Woodward ayaa isku dhacay kaddib markii ay isku diideen siyaasada suuqa kala iibsiga ee suuqii xagaagan iyadoo Jose uu ku dooday inaan xataa kooxda loo keenin hal saxeex oo kamid ah shantii xiddig ee uu dalbaday.
Haddaba, Wargeyska Evening Standard ayaa ku warramaya in Red Devils ay markan isha ku hayaan agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Atletico Madrid ee Andrea Berta kaas oo ay u arkaan shaqsiga wax ka bedeli karaya dhibta kooxda ee dhinaca suuqa.
Manchester ayaa hore xiiso ugu muujisay agaasimaha ciyaaraha ee AS Roma ee Monchi iyo midka Ajax ee Edwin Van Der Sar balse waxay haatan arkoodeen agaasimaha ciyaaraha ee Rojiblancos oo ah shaqsi dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Talyaaniga isla markaana ku fiican indho indhaynta iyo kormeerka suuqa.
Berta ayaa Atletico joogay tan iyo sanadkii 2013 waxaana uu mudadaas sameeyay saxeexyo si weyn kor ugu soo qaaday kooxda sida Antoine Greizmann iyo Jan Oblak oo haatan xubno muhiim ah ka ah kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayaa la filayaa inay agaasimahan wadahadlo deg deg ah la gasho oo ay kooxdeeda ku soo darto dhammaadka sanadkan si uu kooxda uga hawl galo suuqa bisha Januaru.